Ele nke Mobile Marketing Automation | Martech Zone
Otu ebumnuche kachasị elu maka ndị otu bụ ịhazi ahịa na otu ndị ahịa ka ha wee na-ekwukọrịta ma na-etinye usoro ọrụ ha n'ụzọ dị irè karị. N'aka nke aka, ahia choro oba akwukwo nke ihe ndi ozo na usoro ndi ndu, ebe ahia choro obi iru ala na ahia ahia na aka ha. Agbanyeghị na ngalaba ndị a nwere ike ịdị iche, ha ka nwere njikọta ọnụ. Nke a bụ ebe echiche nke akpaghị aka ahịa akpaka abata.
Anyị na ndị otu rụkọrọ ọrụ na Fatstax, a Ahịa iPad ahịa ngwa, na ihe omuma a, nke na-enye ndi otu ulo oru ngwa nke na-enye ndi otu ahia ha ohere inweta ahia ahia na ndi otu ahia ka ha bulite ya n'otu ebe, dika ebe nchekwa. Ngwa ahụ na-ejikọkwa na sistemụ CRM, ka ị nwee ike ịmalite nzụlite na-azụlite ngwa ngwa ma jide ozi ndị ọzọ gbasara ndu. Ebumnuche a bụ inye ndị otu na-ere ahịa ahịa agagharị, site n'inwe ike izipu ihe ngosi, akwụkwọ akụkọ ọcha, ozi nkọwa, wdg na atụmanya ha n'oge nzukọ ahịa, na ịre ahịa nwere ike ịnye ụdị ụdị ọdịnaya ha na-ekere n'ịntanetị. A na-agwa ìgwè abụọ ahụ ihe a na-ekekọrịta na ihe dịnụ, nke na-eme ka nkwukọrịta ka mma n'ime ụlọ ọrụ ahụ na atụmanya.
Ihe omuma ihe omuma a na abanye n'ime ihe igwe ahia ahia nke oma na otu o nwere ike isi gbanwee uzo oru gi na-abiaru ahia na ahia. Ọ na-enyekwa aka "ezigbo oge" n'oge ahịa. N't gaghị ahụ ya n'anya ma ọ bụrụ na enyere gị ozi n'ime nkeji ole na ole ị rịọrọ maka ya? Nke a bụ ihe akpaka azụmaahịa mkpanaka maka.
Na-eji ụdị ngwa ahịa ọ bụla iji melite arụmọrụ gị? Ọ bụrụ na e nwere, gịnị ka ha bụ? Nụla maka ụdị ihe a mbụ? Olee otú ị na-arụ ọrụ kwupụta "enterprise agagharị?"
Tags: kwado ahịa na ahịaotu ahiaakpaghị aka ahịa akpakaNkwado ire ahịa
Mee 24, 2013 na 3: 30 AM
daalụ. ọ bara uru